Edemede Jeff Kerr na Martech Zone |
Edemede site na Jeff Kerr
Jeff bụ onye isi na ngalaba-onye guzobere Akuko. CaseFleet bụ sọftụwia njikwa ikpe nke na-enye ndị ịgba akwụkwọ ikike iji merie karịa, yana ngwaọrụ maka ịhazi oge, ịhazi iwu, ịgba ụgwọ na ihe ndị ọzọ.
Etu ị ga - esi mee ka ndị ọrụ gị nwee obi ụtọ mgbe ị na - ewepụta Mmelite Isi na Ngwa Gị
Satọde, 10 Juun 2017 Jeff Kerr
Enwere esemokwu pụta ụwa na mmepe ngwaahịa n'etiti mmelite na nkwụsi ike. N'otu aka, ọrụ na-atụ anya ọhụrụ atụmatụ, arụmọrụ ma eleghị anya, ọbụna a ọhụrụ anya; n'aka nke ọzọ, mgbanwe nwere ike ịdapụta mgbe ihe ndị ị maara na mberede ga-apụ n'anya na mberede. Esemokwu a kachasị ukwuu mgbe a gbanwere ngwaahịa n'ụzọ dị egwu - nke na enwere ike ịkpọ ya ngwaahịa ọhụrụ. Na CaseFleet anyị mụtara ụfọdụ n'ime ihe mmụta ndị a n'ụzọ siri ike, agbanyeghị